Avoahy daholo izy rehetra !!! Zavatra tsotra 4 azon'ny rehetra atao izao. - Fanentanana manerantany ho an'ny fandriam-pahalemana
Avoahy daholo izy rehetra !!! Zavatra tsotra 4 azon'ny rehetra atao izao.
Aogositra 22, 2021 Fanairana, Vaovao sy hevi-dehibe 0
Ny olom-pirenena Afghana tandindomin-doza rehetra - vehivavy, lehilahy, ankizy, antitra, ireo manana fahasembanana - dia manan-jo hangataka fialokalofana. Tokony hamoaka azy rehetra isika. Ilaina tanteraka ny fanesorana azy tanteraka sy feno. Ireto misy hetsika tsotra 4 azon'ny tsirairay atao hanohanana ity ezaka ity.
Jereo eto ny antso hafa momba ny hetsika fiarahamonim-pirenena any Afghanistan.
Avoahy daholo izy rehetra !!!!
Rehefa mijery ny savorovoro mahafaty ao amin'ny seranam-piaramanidina Kabul, alaim-panahy hamoy fo isika, dia mitady fomba hitadiavana vahaolana handresena an'ity toe-javatra mampivarahontsana ity, amin'ny fampiakarana ny feontsika hitaky ny famindran-toerana azo antoka ho an'ireo rehetra mety ho tratry ny loza ara-nofo.
Ireto misy zavatra tsotra 4 azonao atao dieny izao hanandratra ny feonao ary hiantso ny hafa hanainga ny azy ireo:
Sintomy ary fenoy ny maodelin-taratasy etsy ambany (fenoy ny firenenao sy ny anaranao).
Tadiavo ny anarana sy ny adiresy mailaky ny masoivohon'ny firenenananao any amin'ny Firenena Mikambana, ary andefaso mailaka amin'izy ireo ny kopian'ny taratasy feno.
Tadiavo ny anarana sy ny adiresy mailaka an'ny Minisitra / Sekreteranao misahana ny raharaham-bahiny, ary alefaso imailaka amin'izy ireo ny kopian'ny taratasy feno.
Alefaso any amin'ny olona betsaka araka izay azo atao ity hafatra ity izay mety miraharaha sy mihetsika. Alefaso amin'izay karazana haino aman-jery ampiasainao matetika.
Misaotra anao nanandratra ny feonao tamina hetsika firaisankina sy andraikitra manerantany ho an'ny fiarahamonina.
- Fanentanana manerantany ho an'ny fandriam-pahalemana (8/22/2021)
misintona kinova MS Word amin'ny maodely (na mandika ary apetaho ny lahatsoratra etsy ambany)
Avoahy daholo izy rehetra !!!
Ny olom-pirenena Afgana rehetra at-doza - vehivavy, lehilahy, ankizy, be taona, ireo manana fahasembanana - manan-jo hangataka fialokalofana. Mendri-piderana i Etazonia satria nanoratra kaompaniam-pitaterana an-tsambo hivezivezy ny olona amin'ny toerana fialokalofana ankehitriny ka hatrany amin'ny toerana honenana. Na izany aza, an'arivony hafa no mijanona ivelan'ny seranam-piaramanidina sy manerana ny firenena noho ny tahotra ny ain'izy ireo. Ny vondrona iraisam-pirenena - ny firenena Etazonia sy ny OTAN manokana - dia manana andraikitra hampahomby azy ireo ny fiainana. Ny ho avin'ny firenena dia mety hipetraka amin'ny famonjena ny ain'izay afaka hiverina hanangana ny firenena indray andro izay niasa mafy izy ireo mba hiditra amin'ny 21st vondrom-piarahamonina iraisampirenena. Tokony hamoaka azy rehetra isika. Ilaina tanteraka ny fanesorana azy tanteraka sy feno.
Amin'ny maha olom-pirenen'ny [taninao], Miangavy ny governemanta aho mba hiasa tsy miankina, miaraka amin'ny firenena hafa ary amin'ny alàlan'ny Firenena Mikambana mba hamindra ireo izay mitady hiala an'i Afghanistan. Miangavy izahay hahazoana antoka fa:
Ny seranam-piaramanidina Kabul dia hotazomina mandra-pahavitan'ny famindra;
Hatsangana ireo lalantsara azo antoka sy fitaterana mankany amin'ny seranam-piaramanidina;
Hosokafana ireo sisin-tany ireo hahafahan'ny fidirana an-tanety any amin'ny firenen-kafa ary hanomezana fitaterana azo antoka amin'izany;
Ny firenena rehetra manamorona sisintany, firenena mampiantrano ny toerana fialokalofana sy firenena hafa mety anaovana sidina dia miarahaba sy manome fikarakarana vonjimaika ireo evacuees;
Izay "antontan-taratasy" ho an'ny visa dia hohamoraina ho an'ny vonjy taitra, ary ny ivon-taratasy ho an'ity tanjona ity dia hatsangana ao amin'ny seranam-piaramanidina sy amin'ny toerana misy ny sisin-tany izay azo atao.
Fampianarana fandriam-pahalemana any amin'ny sekoly ambaratonga faharoa Rwanda: Fiatrehana hafatra mifanipaka
Fampianarana kalitao, kolontsaina fikolokoloana sy fiadanam-po ara-tsaina: Feo avy amin'ny ankizy Syriana ao amin'ny sekolim-panjakana any Libanona
Novambra 28, 2020 Vaovao sy hevi-dehibe 0
Tamin'ny fikarohana natao vao haingana nataon'i Hajir tao amin'ny sekolim-panjakana iray tany Libanona, ny traikefa an-tsekoly momba ny ankizy Syriana dia manasongadina fa raha ampidirina amin'ireo sekolim-pirenena ireo mpitsoa-ponenana, dia manohy mahatsiaro ho voahilika amin'ireo fotoana mety hanatsara ny fiadanany ara-tsaina izy ireo. Ny fikarohana nataony dia nanambara ihany koa fa ny fametrahana kolontsaina fikarakarana, ankoatry ny tontolo azo antoka ara-batana sy ara-tsaina, dia zava-dehibe amin'ny firesahana ny fomba fijerin'ny mpianatra ny 'fanabeazana kalitao'. [tohizo ny famakiana…]
“Fandraisana an-tanana avy any ivelany ny fandriam-pahalemana” - manomboka any amin'ny tobin'ny mpitsoa-ponenana Jordaniana
Jona 15, 2018 Tatitra momba ny hetsika 0
Ny programa natolotry ny Berghof Foundation miaraka amin'ny fiaraha-miasa amin'ny Relief International, dia manolotra fomba fampifangaroana avy amin'ny fanabeazana ny fandriam-pahalemana, ny pedagogics amin'ny teatra, ny fahatsiarovan-tena ary ny fikarakaran-tena ho an'ireo mpilatsaka an-tsitrapo Syriana miasa amin'ireo fikambanana iraisam-pirenena isan-karazany raha tobin'ny mpitsoa-ponenana ao Jordania.
Mitondra ny feon'ny mpitsoa-ponenana ao an-dakilasy
Jolay 17, 2018 Tatitra momba ny hetsika 0
NaTakallam ("Miteny Izahay" amin'ny teny Arabo) dia fiaraha-mientana ara-tsosialy izay miteraka fahafaha-miasa ho an'ireo olona nafindra toerana indrindra avy any Syria sy Irak ary mitondra feon'ireo mpitsoa-ponenana, fifanakalozana kolontsaina ary fahafaha-mianatra fiteny amin'ny olona manerana an'izao tontolo izao. NaTakallam dia niara-niasa tamin'ny sekoly 65 sy oniversite 25 amin'ny firenena 13. [tohizo ny famakiana…]